Calaamadaha lagu yaqaan haweeneyda jecel inay ninkeeda xukunto - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/Calaamadaha lagu yaqaan haweeneyda jecel inay ninkeeda xukunto
Xiriir ma leeyalatay haweeney xukun badan? Waa kuwaan calaamadaha haweeneyda xukun iyo amar kutaagleynta badan.
Mar walba iyadaa saxan
Haweeneyda xukunka badan, qaabka ay wax u aragto iyo sida ay iyada wax u sameyso ayaa ah kuwo sax ah. Kaliya waxa ay rabto iyo waxa ay sameyso ayaa wax saxan ah.
Haweeneyda xukunka badan, mar kasta way ku saxantahay xukunkeeda iyo ficiladeeda qof kasta oo kahor yimaadana waa qaldanyahay.
Haweeney kasta oo lasoo baxda ama leh dhaqan noocaan ah 90% iyo 100% waa mid xukun badan.
Qaabka ay iyada rabto kaliya waa in wax loo sameeyaa
Haweeneyda xukunka badan waa mid wax kasta u rabta qaabka ay iyada dooneyso. Haweeneyda noocaas ah kuma faraxdo marka aanan wax loo sameyn sida ay iyada rabto. Si caro leh ayay uga falcelisaa marka sida ay iyada rabto aanan waxa loo sameyn.
Way carootaa marka si aysan rabin wax loo sameeyo
Haweenka caadiga ah way isdajineysaa marka wax aanan loo sameyn sidii ay rabtay balse haweeneyda xukunka badan ma aqbasho taas. Haweeneyda xukunka badan si carol eh ayay uga falcelinee marka wax loo sameeyo qaab aysan rabin.
Haweeneyda xukunka badan waxay sidoo kale jeceshahay inay ku amar taagleyso dhinaca galmada ee guurka. Waxay jeceshahay in loo galmoodo marka ay rabto kaliya balse ninka uusan u dhowaan marka uu isaga rabo.
Waxay isku daydaa inay go’aanada kuu sameyso
Haweeneyda amar ku taagleynta badan waa mid sameysa go’aanadeeda, go’aanada xiriirka iyo xittaa kuwa ninka.
Sababta ay tan u sameyneyso ayaa ah waxay aaminsantahay inay mar kasta saxantahay taas ayaa keeneysa inay go’aanada u sameyso ninkeeda.
23 Waxyaabood Oo Aad Sameyn Karto Si Gacalisadaada Aad Uga Dhigto Mid Aad Kuu Jecel
3 Waxyaabood Oo La Sameeyo Marka Xaaskaaga Ay Aad Kuugu Careysantahay
3 Waxyaabood Oo Dhaca Markaad Xiriir La Yeelato Qof Daroogiiste Ah
How to cook your fried meals in a healthy manner